Samee adigu 4WD
Halkan waxaa ah sadex qoraal oo kala duwan oo aan sameeyey waqti hore.
4WD gaari no. 1 wuxuu ahaa mid la sameeyey 1977-79. Wuxuu ahaa mid ay u dhamystiran yhiin afarta taayir. May jirin halkaas wax ka reeba in uu socdo, marka laga reebo fadhiga mooyee iyo 4 psi taayirada oo kaliya.
Muu lahayn suunka badbaadada (1977)
Matoorku wuxuu ka yimid Vespa ee mooto. Wareega danbe ee mootada waxaa dib u celiya silsilada taayirka ka timid mootada yar.
Shookaanta waxay ku xirnayd labada bareeg ee wareegyada mid kasta. Si fiican u samaynta shookaanta iyo badbaadad suunka waa mid muhiima marka loo eego. Darawalka in aanu ku tuurin dhinaca shookaanta. Bareega dhululubo iyo labada candhada danbe ee isku xiran waxay ka yimaadee Opel Kadett.
Labada candho waxaa lagu alxamay ulo bir ah oo loo sameeyay qaab dhismeedka kore oo adag. Markuu jabay kiisii saxda ahaa ee ku laxaamadnaa qaab dhismeedka kore waxaan u gaabiyey gaari ugu yar sidaas dareedeed baa ku raray baabuurkaygii 1966 Ford Thames Freighter
Badalida geerka (1979)
Geerka waxaa loo badalay in la kordhiyo sheelareynta iyo adkeynta badeelka.
Sifaha - Villy’s 4WD #1:
Sibiibixashada shoonkanta iyo heerka bareeg
Culayka: Ilaa 200 kg
Motoor Vepsa, hal dhululubo kaliya, 2 garaac, hawo qaboojiye siiye qiyaastii 125 csm.
Ugu badnaan: Xawaaraha 30 km/saac
Xanibid: Fadhiga iyo taayirada
Taaryirada: 13", 4 psi
4WD gaari no. 2 waxaa la sameyeey 1982 taasoo ay u dhamaystiran yihiin afarta wareeg iyo isku xirka qaab dhismeedka shookaanta. Isku xirka labada aksel (candho) ee danbe way xiriirsanaayee taas macnaheedu mid ka mida guud ahaan isku yimaadeen. Isku xirka danbe waa mid aan rasmi ahayn in uu socod dheer oo kale duwan lagu kaxeeyo kabaalaha baabuurka (Vauxhall party).
Taayirka bidix 15 sm buu kor dhulka ka qaadan yahay (1982)
Matoorku wuxuu ahaa hawo qaboojiye siiye hal dhululubo, labo garaac oo ay raacsan tahay xawaare joogta oo xukumaya wareega birta wuxuu ahaa mid ku haboon silsilada taayirka. Qeybta shookaantu waxay ka timid Volkswagen.
U dhow sawir. Silsilada waa laga qaaday kululeylka matorka.
Fuulistii ugu horeysay (1982)
Intaas ka bacdi waxay ahayd mid lagu rakibay koore iyo batoon joojiya kordhiyaha. In aanay dib u iman waligii dadejiye bareeg.
Sifaha - Villy’s 4WD #2:
Culayska: Ilaa 130 kg
Motoor Sachs, hal dhululubo 2 garaac, hawo qaboojiye siiye, qiyaastii 150 csm
Hakinta: Xawaaraha qiyaastii 8 km/saac
4WD gaari no. 3 waxaa u dhisay si xirfad leh 1990. Gaarigu wuxuu ahaa mid ayu dhamaystiran yihiin wareegyada iyo sibiibixashada shookaanta. Isku xirka sharaxaada.
Isku xir Villy's website: Sii horumarinta DIY gaariga.